Kusveta chiito hwepedyo uye kana aita zvakarurama uye munhu kodzero, zvinogona kutungamirira muchipfuva-kutinhidza, shaya-anodonha nemashiripiti. Nepo izvi zvinganzwika kutyisa, hazvisi. Nokutevera ichi nyore danho nedanho Guide, nokukurumidza kuva nzira yako kuona mafayawekisi.
Step 1: Kutanga Kiss
Nguva ndiyo zvose. Chikoro nzira dzisinganyatsooneki zvahungava hwakaita, unogona kutanga akamutsvoda pasina achibuda uye vachiti. Kutaurirana nokuti netsvodo kunogona kusanganisira: kubatwa muchidimbu achitarisa miromo yako zuva raJehovha, dzakaparadzaniswa zvishoma miromo yako, kunyemwerera nokumbopota muromo dzichiruma sezvo imi kuona muruoko rwenyu zuva meso, kana kuita muromo wako kissable vane muromo Gloss / chits rutanda uye minty yakachena kufema. Ehe saizvozvo, kamwe maiva nemumwe wako kwenguva yakati, zvimwe zviratidzo uye manzwiro kuchakubatsira kuziva kana yakakodzera kutsvoda navo.
Step 2: Chakaita Mood
Kuvimba muna nekuti tsvodo kunyange sexier kana kuyemura anopiwa. vachiti “imi muri saka wakanaka / akanaka” nenzira yepedyo kunogona kubatsira BSN kukwira nekuchiva. By achideredza vhoriyamu uye matauriro ako paunenge kiya meso anoudza zuva rako kuti zvaunazvo kwavari kwakadzama nemanzwiro ukuwo vachivanyengera kutamira pedyo nemi.
Step 3: Kumuudza Kusveta Chipingamupinyi
Kana iri nokusveta yako yokutanga, kisi wokutanga mutsva nemumwe, kana muri zvishoma huta pamusoro kutsvodana, akadambura vachikisana chipingamupinyi haangavi chete kubatsira kudzikamisa tsinga ivavo asi acharatidza vavariro dzako kudanana. Pane kuenda nokuda guru kutsvoda, kuvimba nokuda ndobva nekutsvodana yenyu musi wacho dama. The kiyi danho iri kupinda muzvikoro. Itai manzwiro ako uye nevavariro zvakajeka nokuisa kutsvoda pedyo nzeve kana muromo apo vanoswerera kuti masekonzi mashoma. Kuzevezerana chinhu flirty kupinda nzeve dzavo apo miromo yako kuzopedza iri imwe nzira yokubatsira kuputsa kutsvoda chipingamupinyi.
Step 4: Kuenda nokuti Kiss
Chengeta kutsvoda nyore. Yakawandisa chido rokutanga kutsvoda kunogona dzoro-kure. Nemiromo yako zvinyoronyoro kuparadzaniswa, kana minda yakananga parinoti kutsvoda kana zvinyoronyoro kiya miromo pamwe zuva yako. In danho iri, zvinokoshawo kutevera mazuva ako kutungamirira. Nyatsoteerera sei zuva renyu anopindura uye zvinofamba panguva kutsvoda. Kana vanosendamira mukati kana kuzopedza, ungakwanisa kutamira kuva zvikuru wakazadzwa nokusveta. Kana zvisiri, agumise kutsvoda kuburikidza achidhonza shure, kuvhura meso ako kuti ziso kuonana, uye uchinyemwerera.
Ndiwo hanimunu pavaipfuura kutsvoda kwacho. Kana iwe wakanakidzwa kutsvoda kuratidza mumwe wako kuburikidza ruoko kunhaka uye uchinyemwerera. Kana uchizopa mberi kutsvoda, nechokwadi kuti urambe chaiko kuonana. Unogonawo chinja yako kutsvoda Style kuburikidza pakona yokuswedera, nokukurumidza uye urefu nokusveta, kutsvoda kutsiga uye umbirimi, uye muromo Positioning. Kana uri kuitwa vachikisana kwechinguvana, Zvinongoreva ndinototsvaka kupinda maziso nemumwe uye afarire nguva.
Nepo izvi tinotarisira rokutanga kutsvoda zhinji yako zuva, zvakakosha mariri ari kunzwa panguva iyi. Regai twinkle kwemvura pameso enyu, rambai achinyemwerera, uye ipai kuna “uri pamusoro nyika” kunzwa.
Kissing ndiko kunonakidza uye kana kukaitwa zvakanaka, Masasaradzi kuchabhururuka uye hamungandiurayi…
Wokutanga kisi une munhu mumwe mukuru nguva ari…
Vakaroorana kunotozongoita ukasangana kutaurirana hiccups munzira, kana vari vachangobva kufambidzana kana vachipemberera emakore…